October 8, 2020 - Achawlaymyar
October 10, 2020 October 8, 2020 by Achawlaymyar
ကောင်းလိုက်တဲ့စကား သင့် ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာ ငွေ ရှစ်သောင်း ခြောက်ထောင့်လေးရာ (၈၆, ၄၀၀) ရှိတယ်။ လူတစ်ယောက်က သင့်ဆီက ၁၀၀တန်တရွက် ခိုးသွားတယ်။ ဒါဆိုရင် သင် စိတ်ဆိုးမာန်ဆိုးနဲ့ အဲဒီလူကို လိုက်ရှာဖမ်းဖို့အတွက် သင့်ကျန်တဲ့ပိုက်ဆံ (၈၆, ၃၀၀) လုံးကို ပုံပြီးသုံးမလား။ ဒါမှမဟုတ် မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်နေမလား။ အဖြေ ကတော့ ရှင်းပါတယ်။ စိတ်ပြေ လက်ပျောက်ပဲ နေမှာပေါ့။ ၁၀၀လောက်လျော့သွားတာ အတွက် ဘာကြောင့် မအိပ်နိုင် မစားနိုင်ဖြစ်နေမလဲ။ ဟုတ်ပြီ၊ ဒါဆို သင်တို့ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့တနေ့တာမှာ စက္ကန့်ပေါင်း ၈၆, ၄၀၀ ရှိတယ်။ အဲဒီထဲက တစုံတယောက်ကြောင့် စိတ် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရတဲ့ အချိန် တစ်မိနစ်ကျော်ကျော် (စက္ကန့် ၁၀၀လောက်) အတွက်နဲ့ ဘာကြောင့်များ စိတ်ဆိုးဒေါသတွေ … Read more
“မိနျးကလေးတိုငျးဖတျပါ စကား လကျဆောငျ”
October 8, 2020 by Achawlaymyar
“မိန်းကလေးတိုင်းဖတ်ပါ စကားလက်ဆောင်” မိန်းကလေးတိုင်း လှလှပပလေးနေပါပေါ့ပါးလွှတ်စွာ ဘဝ ကိုရှင်သန်နိူင်ဖို့ပဟုသုတ ရှိမယ့် စာတွေလည်း ဖတ်ရမယ်ပြီးတော့ ကိုယ့်အားကို ကိုးပြီး အလုပ်လည်းလုပ်ပါ မိန်းကလေးဆိုတာ အလှအပလည်း မက်တယ်ခန္ဓာကိုယ် အလှအပကြောင့် ဘဝ မလှတဲ့ အဖြစ်တော့အမြဲသတိထား စည်းကမ်းရှိရှိနေထိုင်ပါ။ သန့်ရှင်းမူနဲ့အမြဲတမ်း သပ်ရပ်မူစွာ လှလှလေးနေတတ်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်က သပ်ရပ် သန့်ရှင်းမူတွေ နဲ့လှလှပပနေခြင်းက ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မူတိုးစေပါတယ်။ မိန်းကလေးဆိုတာ ဒီကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့မိခင်ဖြစ်လို့အတတ်နိူင်ဆုံး ချိန်ပေးပြီး အသိပညာရစေမယ့်ခွန်အား ရှိစေမယ့် စာပေတွေကို ဖတ်ရူလေ့လာသင့်တယ်။ စာဖတ်တဲ့ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ဟာအမြဲတမ်း တက်တက်ကြွကြွနဲ့ လန်းဆန်းစေတယ်တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်မူတွေရှိတဲ့ ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်ရစေတယ်။ စိတ်နှလုံးသား လှပပြီး သိမ်မွေ့နူးညံ့လာ စေတယ်။ဘဝရဲ့ လောကဓံ ကိုပြုံးပြုံးလေးနဲ့ ရင်ဆိုင်နိူင်စေတယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အားနွဲ့တဲ့ မိန်းမသားတစ်လောက်နဲ့မတူအောင်စိတ်ဓါတ်တွေလည်း ကြံခိုင်သန်မာလာ စေတယ်။ … Read more
ဝက်ခြံကင်းစင်ပြီး ညီညာတဲ့ အသား အရည်ဖြစ်အောင် ဘယ်လို မျက်နှာကိုဆေးကြောမလဲ
ဝက်ခြံကင်းစင်ပြီး ညီညာတဲ့ အသားအရည်ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုမျက်နှာကိုဆေးကြောမလဲ ? မျက်နှာပေါ်မှာရှိတဲ့ အရေပြားက တစ်ခါတစ်လေ မညီညာပါဘူး။နဖူးပေါ်မှာ ဝက်ခြံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အမာရွတ်တွေကြောင့် အမဲစက်တွေဖြစ်နေတာတွေ နှာခေါင်းမှာ နေလောင်ဒါဏ်ကြောင့် မဲနေတာတွေလည်းရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့လိုမညီမညာဖြစ်နေတဲ့ မျက်နှာက အရေပြားတွေကို မျက်နှာပုံမှန်သစ်ပေးတာနဲ့ ညီညာပျောက်ကင်းစေမယ့် နည်းလေးကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ ပါဝင်မယ့် ပစ္စည်းနှစ်ခုကတော့ ခရမ်းချဉ်သီးရယ် နွားနို့ရယ်ပါ။ခရမ်းချဉ်သီးနဲ့ နွားနို့ကို ရောပြီး အပါတ်တိုင်းမျက်နှာကို ဆေးကြောပေးခြင်းက မျက်နှာမှာရှိတဲ့ ဝက်ခြံတွေကိုလျော့ပါးစေပြီးတော့ ညီညာတဲ့ အသားအရေကို ရရှိစေနိုင်မှာပါ။ ပထမဦးဆုံးအနေတဲ့ လတ်ဆတ်ပြီး မကြိုချက်ရသေးတဲ့ နွားနို့လိုအပ်ပါတယ်။ပြီးရင် ခရမ်းချဉ်သီး အမှည့်လိုအပ်ပါတယ်။ ခရမ်းချဉ်သီးအမှည့်ကို အလယ်ကလှီးပြီး အထဲက အနှစ်ကိုယူရမှာပါ။ အစေ့တွေကို စစ်ပြီးယူဖို့တော့လိုပါတယ်။ အစေ့တွေကိုဇကာစ သေးသေးလေး ဒါမှမဟုတ် ပိတ်စပါးပါးလေးနဲ့ စစ်ပြီးတော့ ညှစ်ချရမှာပါ။ပြီးရင် နွားနို့နဲ့ ဆတူရောပြီး … Read more
သငျ့ရဲ့တနျဖိုးကို နားလညျတဲ့သူဆီမှာပဲ စိတျခံစားခကျြတှကေို မွုပျနှံထားပါ…..
သင့်ရဲ့တန်ဖိုးကို နားလည်တဲ့သူဆီမှာပဲ စိတ်ခံစားချက်တွေကို မြုပ်နှံထားပါ မင်းကို ခွင့်လွတ်ပေးနိုင်တဲ့ သူဆီမှာပဲ မင်းရဲ့ စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက် အမူအကျင့်လေးတွေကို လုပ်ပြပါ…. မင်းကို နားလည်ပေးနိုင်တဲ့သူဆီမှာပဲ မင်းရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကို ဖော်ပြပါ မင်းကို ဂရုစိုက်ပေးနိုင်တဲ့ သူဆီမှာပဲ မင်းရဲ့ နာကျင်ဝမ်းနည်းမှုတွေကို ရင်ဖွင့်ပါ…. မင်းကို မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားပေးတဲ့သူဆီမှာပဲ မင်းရဲ့ ခွင့်လွတ်နားလည်ပေးခြင်းတွေကို ပြန်ပေးပါ … မင်းအပေါ် အကောင်းဆုံး နားလည်ပေးဆပ်နိုင်သူကိုသာ မင်းရဲ့ သစ္စာ စောင့်ထိန်းမှုတွေကို မြုပ်နှံထားပါ… မင်းအပေါ် ကောင်းတဲ့သူတွေအပေါ်မှာ ပြန်ကောင်းဖို့ မမေ့ပါနဲ့ မင်းအပေါ် တန်ဖိုးထားတဲ့သူတွေကို မဆုံးရှုံးခင် တန်ဖိုးထားပါ…. ဘဝမှာ အချိန်ကြာကြာ ရင်းနှီး ပတ်သက်ကြသူတိုင်းက တစ်ဖက်သတ်ဆန်တဲ့ ဆက်ဆံရေးမျိုး မဟုတ်ကြပါဘူး…. အပြန်အလှန် ထိန်းကြောင်းပေးရင်း ရပ်တည်ကြတာမျိုးပါ။ မင်းကို ချစ်တဲ့သူ … Read more
သင် မွေးဖွားခဲ့ တဲ့ အချိန်ကပြောပြတဲ့ သင့် အကြောင်း မှန်မမှန် ဖတ်ကြည့်သွား..
သင်ဘယ်အချိန်မှာမွေးဖွားလည်းဆိုတာ သိတယ်ဆို မှန် မမှန်ဖတ်ကြည့်သွား… ည သန်းကောင်ကျော် တွင်မွေးသူများ ညမွန်း တည့်(၁၂)နာရီကျော် ၍ တစ်နာရီ၊ နှစ်နာရီ စသည့် အချိန် ပတ်ဝန်းကျင် တွင်မွေးဖွား သူများဖြစ်လျှင် ဘဝတစ် လျှောက်လုံး တွင် ဆွေမျိုး ညီအစ် ကိုမောင်နှမ များနှင့် နီးစပ် ဆက်သွယ်ရသော အကျိုး ကို ပေးကို ရလိမ့်မည်။ ညီအစ်ကိုမောင်နှမ ဆွေမျိုး သားချင်းများ သည် ဇာတာရှင်၏ ဘဝတွင် ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုးပြုကြ ကုန်သော အဓိက ဇတ်ဆောင် များဖြစ်ကြ လိမ့်မည်။ မိဘမောင် ဘွားများကြောင့် အိမ်ထောင်ရေး အချစ်ရေးတို့ တွင် အနှောင့် အယှက် အတား အဆီးတွေ့ရ သူများ ၊ မိဘမောင်ဘွားများ … Read more
မိန်းကလေးတစ်ယောက် ပြောင်းလဲသွားမှ သစ္စာမရှိဘူးဆိုတဲ့စကား ကြုံရာလူနဲ့ လက်ဆောင်မပါးပါနဲ့..
မိန်းကလေးတွေ လိုချင်တာ ငွေကြေးချမ်းသာမှု မဟုတ်ပါ ဘူး … ။ သူတို့ဘဝကို နားလည်ပေးနိုင်သူရယ် လုံခြုံမှု ပေးနိုင်သူရယ်ပါ မိန်းကလေးဆိုတာ အလိုလိုနေရင်း အားငယ်တတ်သူတွေပါ … ။ အဆင်မပြေချိန် စိတ်အားငယ်ရချိန်တွေမှာ သူတို့ ရင်ဖွင့်ချင်တာ သူတို့ ငိုကြွေးချင်တာ ချစ်သူ ရင်ခွင်မှာပါ … ။ ဒါပေမယ့် ယောက်ျားလေး အများစုက ချစ်တယ်လို့ ပြောပြီးရင် ပြီးသွားပြီ တော်ရုံ ဂရုမစိုက်တတ်ကြဘူး စိတ်မရှည်တတ်ကြဘူး မအားဘူးဆိုတဲ့ စကားက သူတို့ရဲ့ ဆောင်ပုဒ်ပါပဲ … ။ ဂရုစိုက်မှုမရှိရင် အချစ်က အလကားပဲလေ ချစ်တယ်ပြောပြီး … ပစ်ထားတတ်တာ ယောက်ျားလေးတွေ အကျင့်ဆိုရင် သွေးအေးအေးနဲ့ တိတ်ဆိတ်စွာ လမ်းခွဲတတ်တာ မိန်းကလေးတွေ အကျင့်ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့ … Read more
ကလေးတွေကို ဆုံမတဲ့အခါ ဖခင်တိုင်း ဖျောက်ရမယ့် အကျင့် (၇)ခု
သားသမီး အုပ်ချုပ်ပုံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အဖေတွေ ဖျောက်ရမယ့် အကျင့် (၇) မျိုး ၁ – တအားအော်ခြင်း စိတ်ဆိုးဒေါသထွက် တဲ့ အခါမျိုး၊ ပြောချင်တဲ့ အဓိက အချက်ကို အာရုံစိုက်စေ ချင်လွန်း တာမျိုး ရှိတဲ့အခါ အဖေတွေက သားသမီးတွေကို အော်တတ် ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အော်ဟစ်ခြင်းဟာ စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်တာကို မပြေပျောက်စေ ပါဘူး။ ကိုယ်ပြောမယ့် အဓိကအချက်ကို ကလေးက ပို အာရုံစိုက် သွားမယ်လို့ ထင်မြင်တာ ကလည်း မှားပါတယ်။သင်အော်ဟစ်နေ တဲ့ အချိန်မှာ ကလေးရဲ့စိတ်ထဲ ကြောက်စိတ် တစ်ခုပဲ ရှိပါတယ်။ ဘာအတွေးမှ သူ့ခေါင်းထဲမှာ အလုပ်မလုပ် နိုင်ပါဘူး။ သားသမီးတွေကိုမှ မဟုတ်ဘဲ မိသားစုဝင်တွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အခါ အော်ဟစ်ခြင်းဟာ … Read more
သငျ့ရဲ့ အနာဂတျ အတှကျ ဒီလို မိနျးကလေးမြိုးကိုသာ ဇနီးလောငျးအဖွဈ ရှေးခယျြပါ
( ၇ )ရကျသားသမီးမြားအတှကျတဈပတျစာ ဟောစာတမျး(8.10.2020မှ 14.10.2020ရကျနထေိ့)
တနင်ျဂနှသေားသမီး မြား ယခုကာလအတှငျးစီးပှားရေးအဆငျပွသေောကာလဖွဈသညျ။မိမိတတျကြှမျးထားသောပညာရပျမြားကိုအသုံးခခြိနျဖွဈသညျ။မိမိရဲ့စုဆောငျးထားသောငှမြေားကိုလုပျငနျးအတှကျရငျးနှီးမွှုပျနှံသငျ့သညျ။စီးပှားရေးအဆငျပွသေောကာလဖွဈကာငှကွေေးအဆငျပွေ အောငျမွငျလာဖို့ရှိသညျကနျြးမာရေးမှာတော့မတျောတဆထိမိခိုကျမိတာအသေးအဖှဲကိစ်စလေးတှမှေတဈပါးထူးထူးခွားခွားကွီးမားသောပွဿနာမရှိပါဘူး။အခဈြရေးမှာတော့ခဈြခွငျးအားဖွငျ့ပွညျ့ရှမျးနပေါလိမျ့မယျ။ခြိုမွနျသော နရေကျမြားက စောငျ့ကွိုနပေါ တယျ။ခဈြသူရညျးစားမြားအဖို ပွဿနာမြားဝေးကှာ၍ အကွငျနာတိုးအခဈြပိုနပေါလိမျ့မယျ။အိမျထောငျရှငျမြားကတော့စကားနညျးရနျစဲနပေါမညျ။တဈပတျသာကံကောငျးစသေောအရောငျကတော့အစိမျးရောငျဖွဈပွီးကိုယျ့ရဲတပတျတာကံကောငျးမှုကွုံစရေနျ အစိမျးအပွာနုရောငျအဝတျစားမြားရှေးခွယျဝတျဆငျပါတပတျတာအတှငျးအညံ့ပွောကျပွီးကံကောငျးလဒျရှငျစရေနျကနျ့ကျောညှနျ့၁၂ညှနျ့ဘုရားလှူကာဆုတောငျးပါ တနင်္လာသား/သမီး အလုပျအကိုငျစီးပှားရေးကတော့အကောငျးကွီးမဟုကျသေးပါဘူးလုပျငနျးဟာသူတပါးထကျကဆြငျးနပေါတယျ။မိမိအလုပျမှာလူမလာတာမြိုး၊လူမဝငျတာမြိုးဖွဈနပေါတယျ။လကျအောကျငယျသားတှအေလုပျထှကျတပညျ့တှသေစ်စာဖောကျတာမြိုးကွုံရမယျ။ကနျြးမာရေးကတော့ဦးခေါငျးမှာမူးဝတောမြိုး၊ခေါငျးကိုကျခဲတာမြိုးစတဲ့အာဂန်တုရောဂါလေးတှလေောကျပါပဲစိုးရိမျစရာမရှိပါဘူးအခဈြ ရေးခဈြသူမရှိသူမြားခဈြသူရရှိနိုငျပါတယျအခဈြရေးကံဇာတာကောငျးပွီးစနျးပှငျ့နတေတျပါတယျ။ယခငျကပွဿနာဘယျလောကျဘဲတကျခဲ့ပါစယေခုအခါမှာတော့သာယာအဆငျပွနေပေါမယျရငျခုနျစရာလေးတှကွေုံရမယျ။အနှောကျအယှကျလေးတှကေိုအောငျမွငျဖွတျကြျောနိုငျပါလိမျ့မယျ။ တပတျတာကာလအတှငျးကံကောငျးစသေညျ့အရောငျကတော့အညိုရောငျမီးခိုးရောငျအနကျရောငျတို့ဖွဈပွီးအရေးကွီးသောကိစ်စရပျမြားလုပျကိုငျရာတှငျ၎င်းငျးအဝတျစားမြားကိုဝတျဆငျပါ။တပတျတာကာလအတှငျးအညံ့ပွောကျ၍ကောငျးကွိုးရောကျစရေနျယတွာကတော့စံပယျပနျးသို့မဟုကျဇှနျပနျး၉ပှငျ့ဘုရားမှာကပျလှူပွီးလိုရာဆုတောငျးပါ။ အင်္ဂါသားသမီး ယခုကာလမှာတော့အလုပျကိုငျစီးပှားရေးအထိုကျလြောကျအဆငျပွတေိုးတတျသောကာလဖွဈသညျအထူးသဖွငျ့အရောငျးအဝယျကောငျးသမားမြားမိမိဆိုငျလုပျငနျးသို့ဈေးဝယျသူမြားလာရောကျမညျငှကွေေးကံဇာတာတကျသော ကာလဖွဈသညျ။အခကျအခဲကွုံတှရေ့ပါသျောလညျး အနညျးငယျအားထုတျမှုဖွငျ့ကြျောလှားနိုငျမညျ။ ကနျြးမာရေးအနနေဲ့အနအေထိုငျအစားအသောကျမှားခွငျးဒူးနာခါးနာဖွဈတတျသညျ။အခဈြရေးအနနေဲ့စိတျလနေမေယျအထီးကနျြဆနျလှနျးနမေယျအဆငျမပွမှေုမြားကွုံမယျတပတျတာကာလအတှငျးကံကောငျးစသေညျ့အရောငျကတော့အဖွုရောငျအဝါရောငျမြားဖွဈပွီးထိုအဝတျအစား အသုံးအ‌ဆောငျမြားကိုဆောငျယူသုံးစှဲပါကခုကာလအတှငျးကံအခှငျ့လနျးပှငျ့လနျးနိုငျပါလိမျ့မယျ။တပတျတာကာလအတှငျးအညံ့ပွောကျကာကံကောငျးမှုမြားရရှိစရေနျဘုရားမှာရသေနျ့ဘူးလှူပွီးလိုရာဆုတောငျးပါ။ ဗုဒ်ဓဟူး/ သား/သမီးမြား ယခုကာလမှာတော့ဥယာဉျခွံမွနှေငျ့ပါတျသတျသောလုပျငနျးမြားဖွဈထှနျးအောငျမွငျတတျသညျ။ရကျလှနျထားသော အကွှေးမြား ပွနျလညျရရှိတတျသညျ။လုပျငနျးမြားအောငျမွငျတတျသညျ။‌အသီးထှကျကောငျးခွငျး၊မြိုးအောငျခွငျးတို့နှငျ့အတူလုပျငနျးတိုးခြဲ့သငျ့သောကာလဖွဈသညျ။ကနျြးမာရေး သှား၊သှားဖုံး၊မေးရိုး၊မကျြရိုး၊ခေါငျးမူးခေါငျးကိုကျဖွဈတတျသညျ။ယခုကာလအတှငျးကံကောငျးစသေညျ့အရောငျမှာနီညိုရောငျ၊အညိုရောငျကွကျသှေးအရောငျတို့ဖွဈကွပွီး အရေးကွီးသောကိစ်စမြားလုပျဆောငျသောအခါတှငျ ၎င်းငျးအရောငျမြားရှေးခွယျအသုံးပွုပါကကံအခှငျ့လမျးပိုမိုပှငျ့လနျးနိုငျပါသညျ။တပတျတာကာလအတှငျးကံအညံ့ပွောကျ၍ကောငျးသောကံကွမ်မာမြားရရှိစရေနျမမွေို့ပနျး၁၉ပှငျ့ကိုဘုရားမှာလှူပွီးလိုရာဆုတောငျးပါ။ ကွာသ‌ပတေးသား/သမီးမြား ယခုကာမှာတော့မိမိရညျမှနျးခကျြစိတျကူးအတိုငျးခြောမှနေ့ပေါသညျ။လုပျငနျးအပွိုငျအဆိုငျမြား ရှိနပေါသောလညျးအောငျမွငျစှာကြျောဖွတျနိုငျမညျ။ငှအေလိမျခံရတာမြိူးရှိနပေါ၍ အရငျးအနှီးကွီးမားသောကိစ်စရပျမြား‌တှငျ သခြောစှာစဈဆေးပါ။ကနျြးမာရေးအအေးမိ၊လထေိုးလအေောငျ့၊အစားမှားဖွဈနိုငျသျောလညျးစိုးရိမျစရာမရှိပါ။အခဈြရေးမှာတော့ခဈြသူရညျးစားမရှိသူမြားကတော့ခဈြ ခွငျးတရားနဲ့ ဝေးကှာနပေါလိမျ့မယျ။ခဈြသူရညျးစားမြားအတှကျကတော့ယခုတဈပတျအတှငျးဆကျဆံရေးမြားသညျ အဆငျပွခြေောမောနပေါမယျ။ကံကောငျးစသေညျ့အရောငျအနီရောငျနှငျ့ပနျးရောငျနုနုမြားဖွဈပွီးတပတျတာကာလအတှငျးအရေးကွီးကိစ်စပွောဆိုဆောငျရှကျရာတှငျအသုံးပွုပွီး ဝတျဆငျသုံးဆှဲပါက ကံအခှငျ့လမျးပိုမိုပှငျ့လနျးနိုငျပမေညျ။တပတျတာကာလအတှငျးကံအညံ့ပွောကျ၍ကောငျးကွိုးရောကျစရေနျယတွာကတော့သဈတျောသီ၉စိပျဘုရားမှာလှူဒါနျးပူဇျောပွီးလိုရာဆုတောငျးပါ ။ သောကွာသား/သမီးမြား ယခုတပတျတာကာလအတှငျးမှာတော့ရပျဝေးမှလုပျငနျးမြားအကြိုးပေးတတျသညျ။အလုပျပွောငျးရှလေိုသော စိတျကူးမြားပျေါပေါကျနတေတျသညျ။မိမိ၏ ရာထူးကွီးမားသောသူမြား၏ ကောငျးမှနျသော အကူအညီမြား ရရှိပိုငျဆိုငျတတျသညျ။ပရဟိတလုပျငနျး ဥယဉျြခွံမွလေုပျငနျး အရောငျးဝယျလုပျငနျးမြားအကွိုးပေးသောကာလဖွဈမညျ။ကနျြးမာရေးအနနေဲ့ကတော့အတှေးမြား ကွောငျ့ကခြွငျမြားးကွောငျ့ခေါငျးမူးခေါငျးကိုကျသှေးကခြွငျးမြားဖွဈတတျသညျ။တပတျတာကာလအတှငျးကံကောငျးစသေညျ့အရောငျကတော့အနကျနှငျ့အပွာရောငျခရမျးရောငျတို့ဖွဈပွီးမိမိလုပျငနျးကိစ်စအဝဝလုပျဆောငျရာတှငျဝတျဆငျအသုံးပွုပါက ကံအခှငျ့လနျးပိုမိုပှငျ့လနျးနိုငျပါသညျ။ တပတျအနနေဲ့ အညံ့ပွောကျပွီး ကောငျးကွိုးရောကျစရေနျထနျးလြှကျခဲ၁၀ခဲကို ခှေးအားအစာအဖွဈကွှေးကာငှကွေေးအဆငျပွရေနျဆုတောငျးပါ။ စနသေား/သမီးမြား … Read more
အောင်လအန်ဆန် ရဲ့ မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်း ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံကာကွယ်ပွဲ ကျင်းပမည့်ရက်ကို ထုတ်ပြန်ပြီ
ONE ဝိတ်တန်းနှစ်ခုချန်ပီယံ မြန်မာ MMA ကစားသမား အောင်လအန်ဆန် ၏ မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်း ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ ကာကွယ်ပွဲကို အောက်တိုဘာ ၃၀ ရက်တွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။ အောင် လအန်ဆန်သည် မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်း ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံကာကွယ်ပွဲအဖြစ် နယ်သာလန် နိုင်ငံသား ဒီရစ်ဒါနှင့် ယှဉ်ပြိုင်ထိုးသတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ONE Championship သည် အောက်တိုဘာ ၃၀ ရက်တွင် Inside The Matrix အမည်ဖြင့် ကျင်းပမည့်ပြိုင်ပွဲတွင် ပါဝင်မည့် ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံစိန်ခေါ်ပွဲ လေးပွဲကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ရာ အောင်လအန်ဆန်၏ တွဲဆိုင်းလည်း ပါဝင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသည့် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ အခြေအနေကြောင့် အောင်လအန်ဆန်အနေဖြင့် ယခုနှစ်အတွင်း ပထမဆုံးပွဲကို အောက်တိုဘာမှ ယှဉ်ပြိုင်ထိုးသတ်ရခြင်းဖြစ်သည်။ အောင်လအန်ဆန်သည် မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်း ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံကာကွယ်ပွဲကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် … Read more